Barafka Arctic ayaa dhalaala xilliga jiilaalka sidoo kale | Saadaasha Shabakadda
In kasta oo laga yaabo inay xiiso leedahay, Barafka Arctic ayaa sii dhalaalaya xilliga qaboobaha, sida lagu muujiyey xogtii ugu dambeysay ee Janawari ee Xarunta Qaranka ee Barafka iyo Barafka (NSIC ee loo soo gaabiyay Ingiriis). Bishiias waxay ku dhammaatay 13,06 milyan oo kilomitir oo baraf ah, 1,36 milyan km2 ka yar intii lagu jiray muddadii tixraaca ee socotey 1981 ilaa 2010.
Heerkulka qaybtaan adduunka ka mid ah ayaa aad ugu kululaanaya barafka haynta, sidaas darteed badda Arctic ayaa la filayaa in laga tago iyada oo aan daboolin barafkeeda mustaqbalka.
Badweynta Arctic diiwaangeliyey heerkulka ugu yaraan 3 darajo Celsius ka sarreeya celceliska. Badaha Kara iyo Barents kororkaan wuxuu ahaa ilaa 9ºC. Dhinaca Baasifigga, heerkulbeegga ayaa ka akhriyey 5ºC in ka badan celceliska; dhinaca kale, Siberia heer kulkeedu wuxuu ahaa 4ºC ka hooseeya sidii caadiga ahayd.
Isbeddelkan wuxuu ahaa natiijada qaab wareegga cimilada oo xambaarsan hawo kulul oo koonfureed iyo sii deynta kuleylka jawiga meelaha biyaha furan. Intaa waxaa dheer, cadaadiska heerka badda wuxuu ka sarreeyay sidii caadiga ahayd bartamaha Arctic, si hawo kulul oo ka timaadda Eurasia loogu wareejiyo gobolkaas Arctic.
Sawir - NSIDC.org
Haddii aysan waxba is beddelin celceliska heerkulka ayaa la filayaa inuu kor u kaco 4 ama 5 darajo bartamihii qarniga, taas oo matali laheyd laba jeer waxa lafilayo inay kusii kordhaan waqooyiga gebi ahaanba. Dhanka barafka, waxay gebi ahaanba baabi'i kartaa, iyadoo in ka yar 1 milyan oo kilomitir oo laba jibbaaran ay harsan tahay, xagaa walba laga bilaabo sannadka 2030-ka, taas oo runti iyo nasiib-darro macnaheedu noqon doono baabi'inta baarka.
Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaan kugula talineynaa inaad sameyso halkan guji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Barafka Arctic ayaa dhalaala xilliga jiilaalka sidoo kale